बैवाहिक जीवनमा यौनको महत्व ! – Hamrosarokar
बैवाहिक जीवनमा यौनको महत्व !
By Hamrosarokar	 On १३ बैशाख २०७८, सोमबार २०:०८
काठमाडौं, १३ वैशाख–के तपाईको पारिवारिक जीवन सुखी छैन रु श्रीमान् श्रीमतीबीच दिनहुँजसो बेमेल र झगडा हुन्छ ? यस्ता समस्या छन् भने पक्कै
पनि मानसिक तनाव बढ्छ । यो तनावले बिस्तारै वैवाहिक जीवन नै तहसनहस हुन पनि सक्छ ।
महिला र पुरुषले के गर्ने, के नगर्ने ?
तपाईंको परिवारमा यस्तो समस्या छ भने त्यसको समाधान तपाईसँगै छ, त्यो हो यौन । बैवाहिक जीवन सुखमय बनाउन र एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध राख्ने यौनसम्पर्क सरल उपाय हो ।
यौन मानव जीवनकालागि भौतिक वा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक सुख पनि हो । यौनले दम्पत्तिलाई भावनात्मक रुपमा नजिक ल्याउँछ । कतिपय मानिसको बैवाहिक जीवन यौनकै कारणले सम्बन्ध बिच्छेदकै हदसम्म पुग्छ । लामो समय यौन सम्पर्क नगर्दा महिलालाई माया नगरेको अनुभूति हुन्छ भने पुरुषलाई
भावनात्मक रूपमा टाढिएको अनुभूति हुन्छ ।
यो मनमुटाव बढ्दै गयो भने यो समस्याबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन यी उपायहरू फलदायक हुन सक्छन् । पुरुषले के गर्ने ?
यौनको अर्थ संभोग मात्र होइन , यसमा दुबैको उत्तिकै इच्छा हुनुपर्छ । एकान्तमा हुँदा श्रीमतीलाई चुम्बन गर्ने, अंकमाल गर्ने । सँगै हुँदा तनाव नलिने ।
श्रीमतीसँग उसमा इच्छा र आकांक्षाबारे खुलेर कुरा गर्ने । सोचेर मात्र श्रीमतीको प्रश्नको उत्तर दिने, झर्केर कुरा गर्दा समस्या झन् बढ्न सक्छ । यौन सम्पर्कभन्दा अगाडि मायाप्रेमका कुरा गर्ने, फोर प्ले गर्ने आरामले सेक्स गर्ने । सेक्स गर्ने बित्तिकै ननिदाउने, केहीबेर कुरा गर्ने ।
महिलाले के गर्ने ?
यौन साथीलाई मनपर्ने खाना खुवाउने । यौन साथीले भन्दा अगाडि फोर प्ले शुरु गर्ने । यौन साथीको नजिक बस्ने, खुसी हुने ।
यौन साथीलाई मन नपर्ने कपडा नलगाउने । यौन साथीका क्रियाकलापलाई
सकारात्मक रूपमा लिने । मुख गन्हाउने समस्या छ भने सेक्स गर्नुभन्दा अगाडि ब्रस गर्ने । शरीर पसिनाले गन्हाएको छ भने नुहाउने वा परफ्यूम प्रयोग गर्ने । भविष्यको योजनाबारे कुरा गर्ने । यौन सम्पर्कपश्चात टाढा नभाग्ने ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महत्व बुझ्नु भएन, बुझेको…
थप १२ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, ३४ सय ४२ मा संक्रमण पुष्टि